ကျွန်ုပ်တို့၏အနှစ်သက်ဆုံး – vin စာရင်းစစ် /vin အချက်ပေး
(ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ Read မှဆင်း scroll)
အားလုံးမင်္ဂလာပါ, ဒီနေရာမှာ ken, ငါကျော်ကျော်အလိုအလျောက်ကိုယ်ခန္ဓာကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဖြစ်ရပြီ 20 အနှစ်, နှင့်အတိတ်များအတွက်စက်မှုဆိုင်မှာခဲ့ကြ 15. ငါတို့သည်ငါတို့၏ဖောက်သည်များအတွက်ပေးတစ်ခုမှာဝန်ဆောင်မှုသူတို့ကဝယ်ယူရန်ရှေ့တော်၌အသုံးပြုသောကားတစ်စီးထဲကအစစျဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်. ကျနော်တို့ယာဉ်ပတ်ပတ်လည်ပဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြည့်နှင့်အတူမတော်တဆမှုအတွက်ယခင်ကခဲ့ကြောင်းပြောပြရန်နိုင်ခဲ့ပါပြီအကြိမ်ပေါင်းများစွာ.
ကျနော်တို့ကလူတစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်ပေါ်သတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုရမှရှေ့ဆက်သွားနှင့်တစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်သမိုင်းကိုအစီရင်ခံစာဝယ်ယူရန်ကြောင်းအကြံပြုစတင်ကတည်းက ရှေ့တော်၌ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်ခဲ့. အစီရင်ခံစာကိုယာဉ်မကောင်းတဲ့မတော်တဆမှုဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုညွှန်ပြထားသည်ဆိုပါကသူတို့ကိုယ်တိုင်အချို့ပိုက်ဆံနှင့်အချိန်ကိုကယျတငျနိုငျဒီနည်းလမ်း, သို့မဟုတ်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြိုက်သောကွဲပြားခြားနားသော vin number ကိုစစ်ဆေးမှုများသည့်ကုမ္ပဏီများအပေါ်အချို့သောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတူတူထားကြပြီ. အားလုံးမော်တော်ယာဉ်သမိုင်းကိုအစီရင်ခံစာများတန်းတူညီမျှဖန်တီးမဟုတ်, နှင့်အချို့သောကုမ္ပဏီများသည်ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများတွင်ကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးအဘို့ သာ. ကောင်း၏. သတိရ, မည်သည့်ကုမ္ပဏီမော်တော်ယာဉ်မှတဆင့်ခဲ့ပြီအရာအားလုံးကိုသိရန်အဘို့အလမ်းမရှိ, ထုတ် check လုပ်ထားရှိသည်ဖို့သင့်ရဲ့စက်ပြင်ဆရာတစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်မယူမီရုံ Starting Point သို့ကြောင့်.
top ကားသမိုင်းကအစီရင်ခံစာနှင့် vin နံပါတ် lookup Reviews -
vin စာရင်းစစ် - ဤတွင်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းကိုကြည့်ပါ
vin စစ်ဆေးမှုများလုပ်နေတာအဘို့ကြီးသောအစီရင်ခံစာ. ထိုသူအပေါင်းတို့ကမော်တော်ယာဉ်ပေါ်အစီရင်ခံစာများပြုပါ, ကားများနှင့်ကုန်တင်ကားများပေါ်စေမော်ဒယ်များ, ဆိုင်ကယ်, နှင့် RV ရဲ့. ကုန်ကျစရိတ်သာဖြစ်ပါတယ် $9.99, ဒါကြောင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုနှိုင်းယှဉ်ဤအဖို့နှိုင်းယှဉ်ပါကကြီးမားသောငွေစုရှိနိုင်ပါသည် $35. ထိုကဲ့သို့သောခေါင်းစဉ်ကိုပြဿနာတွေအဖြစ်အရေးကြီးတဲ့အချက်အလက်တွေပေးသည်, ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် odometer လက်ကမြင်း, မော်တော်ယာဉ်သတင်းအချက်အလက်, ရှိတဲ့ Junk နှင့်အတူတိုက်မှုစစ်ဆေးမှုများ, ဆယ်နှင့်အာမခံစစ်ဆေးမှုများ.
vin အချက်ပေး -
ဒါကနောက်ကောင်းသော source ဖြစ်ပြီးဖြစ်ပါတယ် အများအပြားမော်တော်ယာဉ်များမှာရှာဖွေနေတစ်စုံတစ်ဦးအတွက်အကောင်းဆုံး. သင်တို့အဘို့အရုံမျှ vin စစ်ဆေးမှုများအမိန့်နိုငျသောကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သညျဤတစျခုကြိုက် $9.99 OR သငျသညျအတော်လေးအနည်းငယ်မော်တော်ယာဉ်များမှာရှာကြသည်လျှင်သင်ရနိုင် 10 ကိုယ့်အဘို့ vin အရေအတွက်ကို lookups များကိုလည်း $16 နှင့်သင်သည်ထိုသူတို့ကိုသုံးနိုင်သည် အချိန်မရွေး, သူတို့ အတွက်သက်တမ်းကုန်ဆုံးကြဘူး 30 ရက်ပေါင်း. ဒီဝန်ဆောင်မှု vin စာရင်းစစ်များနှင့်လည်းသံပုရာစစ်ဆေးမှုများနှင့်ဖော်ပြလီယန်ကဲ့သို့အလားတူသတင်းအချက်အလက်ပေးသွားမှာပါ.
သင်တစ်ဦးတစ်ဦးချင်းစီကနေတစ်ခုသို့မဟုတ်အရောင်းအနေဖြင့်တစ်ဦး Pre-ပိုင်ဆိုင်သောကားတစ်စီးကိုဝယ်ယူကြသောအခါ, မော်တော်ယာဉ်သမိုင်း၏စံချိန်တင်ကိုသင် purchasing နေသောမော်တော်ယာဉ်တစ်သံပုရာမဟုတ်ပါဘူးနှင့်အနာဂတ်၌ပြဿနာများနှင့်အတူအနှောငျ့မည်မဟုတ်ကြောင်းသေချာပါစေအထောက်အကူပြုကြောင်းတန်ဖိုးရှိသောစာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါသည်.
အတိတ်အတွက်မော်တော်ယာဉ်များသမိုင်းကိုစစျဆေးဖို့လမ်းမရှိခဲ့, သင်အဖြစ်ဝေးမော်တော်ယာဉ်ထိန်းသိမ်းထားနှင့်မည်သို့ကြောင့်ကြည့်ရှုခဲ့ပုံအဖြစ်မြင်ရပါတယ်အဘယျသို့ပေါ်တွင်သင်၏ဝယ်ယူသာအခြေခံပြီးနိုင်ကြောင်း. သို့သော်, အင်တာနက်ကိုအတူ, ယခုသင်အလွယ်တကူအွန်လိုင်းသွားနှင့်မော်တော်ယာဉ်များသမိုင်းကိုစံချိန်စစျဆေးနိုငျ.
ဤဝန်ဆောင်မှုများပေးကြောင်းအင်တာနက်အပေါ်ကုမ္ပဏီအများအပြားရှိပါတယ်. သို့သော်သင်သည်ထံမှတရှေးခယျြပါဘူး? ပံ့ပိုးပေးထံမှပံ့ပိုးပေးဖို့ကဘယ်လောက်, ဤအစီရင်ခံစာများကုန်ကျစရိတ်များကွဲပြားခြားနားပါဘူး, ဒါပေမယ့်အခြေခံအားဖြင့်တူညီသည့်အချက်အလက်များပေး. အခကြေးငွေဘယ်နေရာမှာမဆိုအကြားမှဖြစ်နိုင်သည် $15 နှင့် $40. ဤရွေ့ကားကုမ္ပဏီတွေကမော်တော်ယာဉ်အာမခံလွှမ်းခြုံထံမှသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်း, ရဲတပ်ဖွဲ့ကအစီရင်ခံစာများနှင့်မော်တော်ယာဉ်များနှင့်အခြားသတင်းရင်းမြစ်များ၏ဦးစီးဌာန.
အဲဒီမှာပြန်လည် မဟာမိတ်တစ်ဦး vin စစ်ဆေးမှုများ purchasing ရန်မကျဘက်ကိုဖြစ်ပါသည်, ကုန်ကျစရိတ်များအတွက် မှလွဲ., ဒါကြောင့်တကယ့်အကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကူး. သင်ဝယ်စားနေသောကားတစ်စီး၏စျေးနှုန်းညှိနှိုင်းသည့်အခါအချို့အသေးအဖွဲပြဿနာများဖော်ထုတ်စေခြင်းငှါဖြစ်သောကြောင့်တစ်ဦးကစျေးပေါ vin စစ်ဆေးမှုများကိုကြီးစွာသော tool တစ်ခုဖြစ်သည်, စျေးနှုန်းညှိနှိုင်း၌သင်တို့ကိုသြဇာပေးခြင်းအား. စံချိန်တင်အဓိကကိစ္စရပ်များကိုပြလျှင်သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သင်ရုံကိုယ့်ကိုယ်ကိုခေါင်းကိုက်ခြင်း၏စည်းသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်တတ်သည်ဟုသိမှတ်လျက်လွလမ်းလျှောက်နိုင်သည်.
တစ်စက္ကန့်လက်ကားတစ်စီးကိုဝယ်ယူသူတို့တစ်တွေအများကြီးပိုမိုသက်သာရှိပါတယ်ကတည်းကများသောအားဖြင့်ထက်မြက်တဲ့ရွေးချယ်မှုနှင့်တစ်စုံတစ်ဦးကိုဝယ်ယူစျေးနှုန်းပေါ်တွင်ထိခိုက်ခေါ်ဆောင်ကားကိုစာရေးတံချွတ်မောင်းနှင်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်ကပိုက်ဆံဆုံးရှုံးခဲ့, သင်မူကားတစ်ဦး vin စစ်ဆေးမှုများရတဲ့သဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်နဲ့သင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်.
ထို့ပြင်ဤအချက်အလက်ယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်လျှင်သင်ဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီပေးပါမည် ရေလွှမ်းမိုးသောပျက်စီးသွားသော ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ပါ. တချို့ကရေလွှမ်းမိုးသောပျက်စီးသွားသောကားတွေတက်သန့်စင်ပြီးမှတဖန်သစ်ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စျေးကွက်အပေါ်ကိုပြန်ထည့်သွင်းဖို့ spic နှင့်ထွာထားကြပါတယ်. vin စာရင်းစစ်နေတဲ့စျေးပေါသော vin စစ်ဆေးမှုများ purchasing by, မော်တော်ယာဉ်, ရေလွှမ်းမိုးသောပျက်စီးသွားသောသို့မဟုတ်မအစီရင်ခံထားပါတယ်လျှင်သူတို့သည်သင့်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီပေးပါမည်.
မော်တော်ယာဉ်အခိုးခံရသို့မဟုတ်မထားလျှင်အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင်လည်းအဆုံးအဖြတ်၌သင်တို့ကိုကူညီပေးပါမည်. သူတို့ပတ်ပတ်လည်လှည့်ခြင်းနှင့်တစ်စုံတစ်ဦး၏နာမတော်အောက်မှာရောင်းချရန်နိုင်အောင်သူခိုးတွေမကြာခဏကြောင့်စင်ကြယ်၏ခေါင်းစဉ်ကိုပေးရမည်ကိုကူညီအခိုးခံရမော်တော်ယာဉ်များ၏ vin အရေအတွက်ကိုတမ်သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်.
အားလုံးခြုံကြည့်သော်, စျေးပေါ vin စစ်ဆေးမှုများရတဲ့သေချာအောင်သင်တစ်ဦးရဲ့အရည်အသွေးမော်တော်ယာဉ်နှင့်မျှော်လင့်သင်တို့နှောင့်ရှက်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုနှစ်ပေါင်းများစွာပေးမည်တယောက်ကိုရတဲ့နေကြပါတယ်လုပ်အာမခံမယ့်စျေးပေါဖြစ်ပါသည်.
သင်က link ကို click နှင့်ပစ္စည်းဝယ်ယူရန်လျှင်ဤသည်ကိုဆိုလိုသည်အပေါ်က post ထဲမှာအချိတ်အဆက်၏အချို့ "Affiliate လင့်များ။ " ရှိပါတယ်, ကျနော်တို့အနေနဲ့တွဲဖက်ကော်မရှင်ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်. ဂရုမစိုက်ဘဲ, ကြှနျုပျတို့စာဖတ်သူတွေတန်ဖိုးပေါင်းထည့်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုသာအကြံပြုပါသည်.